Abavelisi beagar-abavelisi baseChina abavelisi kunye nefektri
I-agji ye-Fujian Global Ocean yokutya ibakala lokutya isebenzisa i-Indonesia kunye nolwandle lwase-China njengezinto ezingavunyelwanga, eziyinto yendalo ekhutshwe kulwandle lweendlela zenzululwazi. I-agar lolunye uhlobo lweecolloid hydrophilic, ezingenakunyibilika emanzini apholileyo kodwa ngokulula inokunyibilika emanzini abilisiweyo kwaye inyibilike kancinci emanzini ashushu. I-agji yokutya ye-Fujian Global Ocean inokwenza i-gel ezinzileyo kunye nesisombululo esingezantsi kwe-1%, ke yenye yezinto ezibalulekileyo kwimveliso yokutya. Ingangcono usetyenziso ...
I-agji ye-Fujian Global Ocean yezamayeza i-agar isebenzisa iGelidium njengezinto ezingavunyelwanga, ikhutshwe ngeendlela ezintsonkothileyo kunye nezenzululwazi, ekubalulekeni kwazo ukuba kulinywe ibhayoloji. I-Fujian Global Ocean ibanga lokunyanga i-agar inezibonelelo kubushushu obuphantsi bejeli, ukungafihli nto, akukho mvula, njl. Inkqubo yebacteria ...
UAgar, obizwa ngokuba ngu-agar-agar, lolunye uhlobo lwe-polysaccharide evela kwi-gracilaria kunye nolunye ulwelwe olubomvu. Ngenxa yokwakheka kwayo kwejel kunye neempawu ezisempilweni, ibisetyenziswa ngokubanzi ekutyeni, kumayeza, nakwimichiza yemihla ngemihla nakwimizi-mveliso yebhayoloji. Ngokwesiseko se-agar yesiqhelo, iFujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd ivelisa ubushushu obuphantsi obunyibilikayo ngokukhawuleza kunye netekhnoloji yesayensi. Inempawu zokunyibilika okungcono kubushushu obuphantsi kunye nesantya sokunyibilika ngokukhawuleza, inokuthi ...